तिहार दसैंपछिको महत्त्वपूर्ण पर्व हो। तिहारमा काग, कुकुर, गाई–गोरूदेखि मान्छेको समेत पूजा हुन्छ। दिदीबहिनीले दाइभाइको पूजा गर्छन्, आशीर्वाद दिन्छन्। उपहार दिइन्छ। लक्ष्मीपूजाको दिन लक्ष्मी भित्र्याउने भनी घर–घरको ढोकादेखि कौसीसम्म बत्ती बालिन्छ। तिहार फूल, मिठाइ, फलफूलको मात्र होइन, बत्तीको पर्व पनि हो। यही बेला अन्नको पूजा गरिन्छ। गाउँ–ठाउँमा द्यौसी भैलो खेली नाचगान हुन्छ। जताततै सयपत्री, मखमली, गोदावरी आदि रङ्गीचङ्गी फूल फुल्छ। झिलिमिलि बत्तीसँगै नाचगान हुने र रङ्गीचङ्गी फूल र फलफूलको पर्व भएको हुँदा यो पर्वमा रमाइलो हुन्छ, यो उत्सवमय पर्व हो। अझ यही तिहारको बेला म्ह पूजा (गोवर्द्धन पूजा) का दिन नेपाल संवत् फेरिन्छ। नेपालकै नाउँमा नेपालीले नै स्थापना गरेको नेपाल संवत् हाम्रो राष्ट्रिय संवत् हो, त्यसको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नुपर्छ। ८ सय ८८ वर्ष चलेको नेपाल संवत्को थालनीको कारण र सोको विकासक्रमबारे लेखाजोखा गर्नैपर्छ। यथार्थ कुरा प्रकाशमा ल्याइनुपर्छ, यतातर्फ भाषाविद्, इतिहासकार र संस्कृतिकर्मीहरूको ध्यान जानुपर्छ।
शरद् ऋतुपछिको यो उत्सवमय पर्वमा खुसी या उत्सवको क्षणमा आजभोलि जताततै झिलिमिली बत्ती बालेको देखिन्छ। प्रमुख सहरहरू उज्यालोले धपक्क छन्। जताततै झिलिमिली बालेको बत्तीले लोडसेडिङ्गमा थप भार हुने त होइन? विद्युतीय बत्तीको झिलिमिलीले तिहारको मौलिकतामा ठेस पुर्‍याएको छ। माटाका पाला प्रयोग गरेर बत्ती बालेका भए मौलिकतामात्र होइन सुन्दरता थप्छ, आफ्नै स्रोत र साधनको उपयोग हुन्छ। स्थानीय शिल्पकर्मीहरूले काम पाउँछन् र आफ्नै देशवासीहरूको आम्दानीको स्रोत बढ्छ। तर एकपछि अर्को विद्युतीय बत्तीको झिलिमिलीले देशको आम्दानी विदेशिन्छ, नेपाल र नेपालीको सीप, कलामा यसले असर पार्छ।
दीपावलीका लागि भित्रिएका रङ्गीचङ्गी विद्युतीय बत्तीको प्रयोग प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ। राजधानी काठमाडौं त झनै विद्युतीय बत्तीको झिलिमिलीको नाउँमा विद्युतीय बत्तीको लागि करोडौं, अरबौं रकम खर्चिएको हुन्छ। हाम्रो आफ्नै स्रोत र साधनको उपयोग गरी मौलिकता छोड्दै गएपछि हाम्रो संस्कृतिको कसरी संरक्षण हुन्छ? के हामीले आफ्नो मौलिकताको जगेर्ना गर्नुपर्दैन? के हामी हरेक चाड पर्वलाई महँगो खर्च हुने पर्वको रूपमा विकास गर्ने? यसले देशलाई आत्मनिर्भर होइन पराधीन बनाउन सहयोग गर्छ। के विदेशी सामान भित्र्याएर नेपाल समृद्ध बन्छ? के विद्युतीय बत्तीको अधिक प्रयोग गरेर नेपालमा फेरि लोडसेडिङ्गको समय बढाउने? कतै झिलिमिली बत्तीको प्रयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई चुनौती जस्तो हुँदैन? समयमै विचार पुर्‍याउने हो कि !